GPS Navigation ndiye NZIRA kure - ZVINYORWA
mubvunzo GPS Navigation ndiye NZIRA kure - ZVINYORWA
1 gore 10 ago - 1 gore 8 ago #521 by Gh0stRider203
Ndakacherechedza zviri kuita izvi zvishoma kakawanda pano chisero. Haana pamberi 2017 ......
Unogona kuona njanji ndinofanira kuva nokutora, ipapo chete kuchamhembe kwayo, njanji yangu DFW, uye ipapo My Current njanji kuna LFRG, kuchamhembe KUTI.
Ndiri pane Kurasikirwa nei izvozvo anozviita. Dzimwe richafa kubhururuka zvakakodzera njanji neshure kakawanda zvakakwana, uye pane dzimwe nguva zviri zvakafanana Kwete! NOT kuzviita .....
kumhara wangu DFW akanga pedo akakwana. pamusoro dot, uye dzinza yevanhu -.37 Ft / chik panguva touchdown zvakanaka (kuenda mberi .... godo lol)
Munhu akawana chinhu?
1 gore 10 ago #524 by Dariussssss
Zvakanaka, iwe ndakavhiringidza chinhu.
Wanga tinker chinhu pamusoro nzira, pashure kubvisa? I add iwe wakaita, FSX vachatitaka kukanganisa kumusoro yose ndege plan, uye kazhinji kudzosa ndege kune wokutanga nzira-pfungwa. Kana, ufambe kuna HDG kwadzinoita panzvimbo GPS / FMC. Ndicho chikonzero ndiri uzvitarise uye kaviri tarisa nzira kuti chokwadi hapana zvikanganiso kana zvimwe anopenga majana kana chinhu chakadai.
1 gore 10 ago #526 by Gh0stRider203
elnaz Kwete. Handina kuchinja chinhu kana ndichifanira chinja kubva VFR kuti IFR nokuda kuenda pakuva IFR uye panguva iyoyo, ndiri kare neVadzidzi shongwe.
Handina kugara uye vanofarira kutambudzika pana FSX panguva Vols refu izvi. Ndinoita zvimwe zvinhu, zvakadai kutamba World pamusoro Warships (izvo ndiri kuita zvakanaka ikozvino lol)
1 gore 10 ago #527 by Dariussssss
... Ndaive shoma 'pamusoro dziva' 'ndege, chaizvoizvo chimwe refu chaizvo KPHX-LYBE uye ndege yakanga patepi, chaipo inofanira kuva. Handina kukwanisa kuita yose ndege kamwe, saka ndakazviita mashomanana nhengo. Kununurwa pane imwe nguva uye akaramba kana ini mha imwe nguva. Kufanana ndakati, yakanga patepi.
Zvinoita here kuti munditumire kuti kutiza kuronga? (FB kana e-mail) ndichaita kuedza kuzviita. Ndeupi ndege uri kushandisa pane uyu?
1 gore 10 ago #528 by Gh0stRider203
kazhinji ichi hakusi nyaya ......
Ndinoita KDFW - LFRG muna 747-400LCF nokuti kuti zviri pedyo Max chikuva, mumwe kumbonyanya nyore nzira (kana masvika runway 12 lol), uye somugumisiro, ndinoita mari yakawanda nokuti VA pamwe ndege iyi .
Ndava kuda zip faira pamwe 3 urongwa I kushandisa.
KDFW - LFRG VFR kuti runway 12 & 30, uye IFR kuti runway 30
1 gore 10 ago #529 by Dariussssss
OK. Ndichazviita siyanei, ane zvakajairika 747ERF.
Zviri zvikuru chinoshamisa kwandiri kuti kutiza zvakadaro VFR ... pamwe ndipo kukanganisa ndiko ... Zvisinei, ndichaita edza kunze.
1 gore 10 ago #531 by Gh0stRider203
99.999% kubva Vols angu VFR uye KDFW - LFRG ndiyo chete nzira ndine dambudziko iri. Handidi IFR. Ndinoreva chii pfungwa pakuita IFR muna VFR ekunze, kana uchingotaura gonna kukanzura kuitevedzera pashure zvinokubatai-kure?
1 gore 10 ago #532 by Dariussssss
99.999% kubva Vols angu IFR, pamwe ATC, kunyange zvazvo zviri kunetsa seSheori, asi ndinoita nepandinogona napo kuti tirambe nayo chaizvoizvo napo.
Saka kure saka zvakanaka, ndege zvakanaka mudambudziko.
1 gore 10 ago #533 by Gh0stRider203
Ndinoda kuzviita .... asi ndinofarira kurara I Anokuudza kuwedzera vakasimudza maawa
Sei ini achibhururuka zvikuru? zvakanaka chete .... Izvi ndizvo chandakaita kure muna April.
Chechipiri, Ndini ndoga ichibhururuka izvozvi nokuda VA, uye pari zvino mari dzedu $ 961,250 ari anoreva nhema mari mwedzi kuti 2 Pax shiri (zvose muri 777-200LR), uye $ 1,258,334 pamwedzi kuti 2 freighters (747 -800F).
Zviri kumusoro Me nechokwadi isu kuuya zvakakwana neimwe mwedzi kufukidza kuti vaite $ inodiwa uvabhadhare kure.
1 gore 10 ago - 1 gore 10 ago #534 by Gh0stRider203
Ndakaita pfuurei 300K nm mwedzi wokupedzisira, uye Mwari anoziva maawa mangani elnaz
Pamwe hazvina gonna chiito nokuda kwenyu. Haugari kuzviitira ini. It zvachose asingashumbi
Last edit: 1 gore 10 mwedzi yapfuura Gh0stRider203.